Arsenal Oo Cayaartooy Muhiim Ah U Weyneysa AFCON – Garsoore Sports
Arsenal Oo Cayaartooy…
Masar, Ghana, iyo Gabon ayaa dhammaantood cayaarayat Khamiistii, iyadoo mid kastaa uu ogyahay inay xaqiijin karaan u soo bixitaanka bisha Janaayo ee tartanka Qaramada Afrika (AFCON).
Dhanka Masar iyo Ghana, waxay kaliya u baahnaayeen barbaro ay la galaan Kenya iyo Koonfur Afrika siday u kala horreeyaan si ay ugu soo baxaan tartanka.
Mohamed Elneny iyo Thomas Partey midkoodna muu ciyaarin labada kulan. Elneny wuxuu fadhiyey kursiga keydka, halka Partey uusan u qalmin ciyaarta madaama Arsenal aysan dooneyn inuu u safro ‘liiska khatar’ ee Covid ee wadanka Koonfur Afrika.
Dhanka kale, Gabon waxay u baahnayd guul, waxayna haysteen Pierre-Emerick Aubameyang oo bilaabay inuu ka caawiyo inay gaaraan. Kabtanka Arsenal ayaa dhaliyay hal gool midna caawiyay kulankii ay 3-0 kaga adkaadeen D.R. Congo.
Natiijadu waxay tahay in dhammaan seddexda daba ay ka qeyb geli doonaan tartanka AFCON ee ka billaaban doona Cameroon inta u dhexeysa Janaayo iyo Febraayo 2022.
Wali lama xaqiijin, laakiin Ivory Coast ayay u badan tahay inay iyagana ku biiri doonaan. Waxay kaliya u baahan yihiin inay ka guuleystaan ​​xulka ugu hooseeya ee Niger jimcaha (26ka Maarso) si ay u hubiyana usoo bixitaanka tartanka xilli hore.
Taasi waxay la macno noqon laheyd in Arsenal ay weyso Nicolas Pepe, Aubameyang, Partey, iyo Elneny muddo bil ah bartamaha xilli ciyaareedka soo socda.
Dhammaantood waxaa loogu yeeraa dalalkooda nasasho kasta iyagoo soo guta waajibaadkooda, sidaa darteed waxay noqon doontaa wax lala yaabo weyn in la arko dalalkooda oo iyaga laga reebay.
Waqtigaan la joogo, Arsenal waxay heysataa bedel weeraryahanno ah (Alexandre Lacazette, Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli) iyo beddello ballaaran sida (Bukayo Saka, Willian, Gabriel Martinelli Markale). Laakiin waxay is arki doonaan iyagoo khadka dhexe uun heysta haddii aysan sameynin saxiixyo suuqyada soo aadan.